PCB Bare Board, adag PCB debecsan PCB, Golaha smt PCB - Fumax
Waxaan hiigsaneynaa inaan noqono Saaxiibkaaga ugu fiican ee lagu kalsoonaan karo soo saarista elektaroonigga ee Shiinaha! Waxaan u maleyneynaa in mashruucaagu yahay mashruuceena, ganacsigaagu waa ganacsigeenna. Waxaan maalin walba u shaqeynaa si adag oo qiiro leh iyo xirfad leh si aan u helno mashaariic si guul leh loogu guuleysto si loo gaaro qanacsanaanta macaamiisha heerka ugu sareysa.
Waxaan bixinaa adeeg balaaran oo naqshadeyn ah oo ay kujiraan koronto (PCBA), Farsamo iyo Adeegyada injineernimada softiweer. Kooxdayada naqshadeynta waxay diyaar u yihiin inay u shaqeeyaan qayb ka mid ah shaqaalaha injineernimada naqshadeynta si fikradahaagu u noqdaan wax soo saar dhab ah!
Qiimaha Ay Ku Dartay Fumax
Dusha sare adeegga OEM (wax soo saar) iyo adeegga ODM (naqshadeynta), Fumax waxay sidoo kale siisaa adeegyo qiimo badan macaamiisheenna, waxayna ka caawisaa inay gaaraan himilooyinkooda ganacsi.
Waxaan ka caawinnaa macaamiisheenna inay kobciyaan ganacsigooda. Ama shirkad wadamo badan leh waxay raadineysaa dhimista qiimaha badeecadaha jira ama shirkad bilow ah ayaa dooneysa in fikradahooda lagu dhiso wax soo saar cusub, Fumax ayaa door muhiim ah ka ciyaareysa ka qeyb qaadashada macaamiisheena koritaanka ganacsiga!
Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd. waxaa ka go'an inay siiso heer caalami heer caalami wax soo saar qandaraas elektaroonig ah (EMS) iyo adeegyo naqshad casri ah macaamiisheenna adduunka.
Tan iyo aasaaskeennii 2007, Fumax waxay bixisaa xalal dhammaystiran oo loogu talagalay naqshadeynta wax soo saarka & injineernimada, waxyaabaha soo saaraya & soo iibsiga, PCB & PCBA (Golaha Guddiga Daabacan ee Daabacan), dhismaha sanduuqa (caag ama xarkaha birta), wax soo saarka guryaha (100% warshad iska leh) iyo dalbo shixnad iwm
Qanacsanaanta Macaamiilku waa wax walba oo halkan ku yaal Fumax. Waxaan qabanaa wax kasta oo ka fikiraya la kulanka iyo bedelida baahida macaamiisha. Macaamiil faraxsan ayaa macno badan noo leh!
Baro sida macaamiisha u dhahaan ugana hadlaan Fumax:
Noreen (Maamulaha Iibsiga) & Kurt (Agaasimaha injineernimada)
Waxaan la shaqeyneynay Fumax ilaa 2014. Waxaan dooranay Fumax kadib markii aan booqanay labo warshadood oo kuyaala Shenzhen. Warshaddii Fumax ayaa soo martay hantidhawrkeenna. Waxaan aad ula dhacnay awooda warshadooda. Waxaan rarnay kumanaan badeecado ah, waligood ma aanan qabin arrimo tayo leh. Waxaan aad uga qanacsanahay waxqabadka Fumax. Waxaan rajeyneynaa inaan la shaqeyno Fumax sannadaha soo socda ...
Mikael Björnson (Maamulaha guud, shirkadda bilowga ee Stockholm)
Waxaan aad u daneyneynaa inaan xiriir wanaagsan la yeelano Fumax, maadaama aan kugu aragnay inaad tahay qof aad u daacad ah, tayo leh - adeegna aad u leh isla markaana aad u caawin jirtay wajigeena horumarinta. Shisheeye ma sahlana in la ogaado soo saaraha la aamini karo, laakiin waxaad la kulantay rajo kasta. Waxaan kugula talinayaa adiga qofkasta oo aan ku aqaan goobta StartUp ee Stockholm taasi oo raadineysa soosaarayaal. Salaan diiran Mikael
Joe's (Agaasimaha Maamulka, ganacsiga qoyska ee Texas)
Wixii Fumax injineernimada ay sameysay waa wax cajiib ah. Kooxdaadu waxay qaabeeysay & dhistay nooc shaqo oo sax ah oo aan dooneyno. Waxaan awoodnaa inaan tusno macaamiisheenna waqtigooda oo leh natiijooyin ganacsi oo waaweyn. Niman yahow waa yaabe. Waxaan kula talin doonaa Fumax saaxiibada kale ee raba adeega naqshadeynta iyo soo saarista.
Eric (Hawlgallada Agaasimaha ee Ohio)
Waxaan la shaqeynaynay Fumax ilaa iyo 2009. Fumax waxay ku bixisaa looxyada elektarooniga ah iyo armaajooyinka balaastigga ah waqti ku habboon oo tayo sare leh. Weligeen wax arrimo ah kuma lihin Fumax. Waxaan sii wadnaa keenista mashaariic cusub. Fumax waxay noqon doontaa gabi ahaanba xulashada koowaad ee wax soo saarka!
Qaar ka mid ah macaamiisheenna: